Sina XY-5483P loko vita amin'ny lamba vita amin'ny vy vita amin'ny lamba vita amin'ny vy sy orinasa | Shuolong
XY-5483P loko volamena Mizarazara lamba lamba
Weight: 5.6kgs / m2
Hatevin'ny hatezerana: 3.3mm
Fitsaboana ambonin'ny tany: loko
Max Halavany: 8m
Ny fampiharana lamba SHUOLONG mesh arsitektur sy ny fizarana efitrano dia mampihena ny famirapiratana amin'ny isan-jato isan-jato, arakaraka ny lamina harato voafantina, ao amin'ireo faritra nozanahin'ny trano iray matetika ho fandraisana anjara amin'ny crédit jiro sy jiro. Ny fampiharana ny alokaloka anatiny dia matetika koa avo roa heny noho ny fitsaboana amin'ny varavarankely na endrika hafa tsy manam-paharoa amin'ny endrika anatiny.
Fe-potoana: 14-21 andro
Inona's bebe kokoa, raha mila mampiditra singa famolavolana vy amin'ny tetik'asa misy anao na ho avy ianao dia mifandraisa anay mivantana. Ho fanampin'ny vokatra avo lenta sy ny vidiny tsara indrindra, afaka manome ihany koa izahay
Afaka manome anao kojakoja mety mifanaraka amin'ny filanao tetik'asa izahay. Na lalamby mahitsy na lalamby miolikolika misy curvature io dia afaka manampy anao hahatsapa an'io i SHUOLONG. Ny hatevin'ny kojakoja omenay anao dia farafahakeliny 2mm, ary lava kokoa ny androm-piainana. Raha mbola manana fanontaniana momba ny fizotran'ny fametrahana ianao dia aza misalasala mifandray aminay, hanome anao horonan-tsary fametahana amin'ny antsipiriany kokoa izahay hamaliana ireo fisalasalanao.
1.40 taona niainana : Maherin'ny 40 taona ny traikefa famokarana harato.
2.Kalitao Garantee: Ny baiko tsirairay dia voasedra sy voafehy mafy arakaraka ny fenitra ambonimbony kokoa noho ny sehatra iraisam-pirenena.
3.Serivisy namboarina: Ho fanampin'ireo fomba fanaonay efa misy, azonay atao ihany koa ny manamboatra ho an'ny filanao famolavolana
4.Vidiny tsara indrindra: Hifanaraka amin'ny santionany na fanehoana nomen'ny orinasa hafa anay izahay. Mba hanararaotana ny fampanantenanay ny vidin'ny lalao dia alefaso aminay fotsiny ny teny nalaina avy amina orinasa hafa ary hofaranay 10% farafaharatsiny ny vidin'izy ireo
Raha te hametraka ny baiko ianao na mila mahafantatra antsipiriany bebe kokoa momba ny harato vy anay, dia andefaso ny hafatrao amin'ny tranokalanay, antsoy izahay na andefaso mailaka izahay. Hamaly anao izahay ao anatin'ny 24 ora!
Previous: XY-5127 Mesh Architectural ho an'ny Facade CLadding (1)
Manaraka: XY-5483 Fisarahana lamba vita amin'ny vy
Fanamboarana tariby tariby vita amin'ny mari-trano
Lamba volovolo maritrano
Lamba famafazana tenona tariby
Lamba metaly ho an'ny fananganana endrika
Lamba metaly ho an'ny fizarazaran-habakabaka
Lamba vy harato
Lamba vita amin'ny vy vita amin'ny tenona
XY-2510 Deco Metal Architectural harato ho an'ny kabine ...
XY-8914G Mpizara vy varahina fahagola
XY-2222 Lamba metaly metaly ho an'ny efijery haingon-trano
XY-4135 haingon-trano metaly haingon-trano